နှလုံးသားကခြိမ်းခြောက်လို့ရေးလိုက်ရတဲ့စာ | ဥက္ကာကိုကို
Posted in: ကဗျာ.	Tagged: ချစ်သူတစ်ဦးအတွက်.	Leaveacomment
Written by ဥက္ကာကိုကို(သံတွဲ)
အာမထိလျှာမထိ လွမ်းနေမိတဲ့ ပြက္ခဒိန်တွေ
တစ်ရွက်ချင်းဆွဲဖြုတ် ၊ ပြုတ်ထွက်သွားတာနဲ့အမျှ
ဥပေက္ခာပြုခံထားရတဲ့ မင်းကိုချစ်သော သွေးကြောများ
အာဟာရကင်းစွာ တနံတလျား ကွေ့ကောက်လို့။
လွမ်းဆွေးဖို့ ၊ ခွဲခွာဖို့ ၊ ရင်ကွဲဖို့ …လူဖြစ်လာကြရသလိုလို
သင်တုန်းဓားတစ်လက် ၊ အုန်းဆံကြိုးတစ်ချောင်း ၊ ရေကန်ကြီးတစ်ကန်
ကြံကြီးစည်ရာ အိပ်မက်ညတွေ ကယောင်ကတမ်း
ငြင်းပယ်လိုက်ပါကွယ် ။ ။